जनताको रोजाईमा कलाकार, सांसद हुन सफल बलिउड हस्ती !::mirmireonline.com
जनताको रोजाईमा कलाकार, सांसद हुन सफल बलिउड हस्ती !
भारतको लोकसभा निर्वाचनमा होमिएका बलिउडका केही चर्चित हस्तीहरु जनताबाट चुनिएर सांसद हुन सफल भएका छन् भने केही पराजित भएका छन् । अभिनेता सनी देओल पहिलो पटक राजनीतिक मैदानमा उत्रिएका थिए । उनी भारतीय जनता पार्टीमा केही महिना अघि प्रवेश गरेर सोही पार्टीको उम्मेदवारका रुपमा पञ्जावको गुरुदासपुर क्षेत्रको चुनावी मैदानमा होमिएका थिए । विपक्षी दल कांग्रेसले राम्रो नतिजा ल्याएको सो प्रदेशमा भारतीय जनता पार्टीबाट विजयी हुने चार सांसदमध्ये सनी देओल एक हुन् । उनले कांग्रेसका सुनीलकुमार जाखडलाई ७७ हजार १०७ मतले पराजित गरे । बलिउडमा आफ्नो जमानामा ‘ड्रिम गर्ल’ उपनाम पाएकी हेमा मालिनी पनि भारतीय जनता पार्टीबाटै निर्वाचित भइन् । उनी मथुरा क्षेत्रबाट उम्मेदवार भएकी थिइन् । उनले राष्ट्रिय लोकदल तथा गठबन्धन उम्मेदवार नरेन्द्र सिंहलाई २ लाख ९३ हजार ४७१ मतले पराजित गरिन् ।
बलिउड अभिनेता राज बब्बर लामो समयदेखि राजनीतिमा सक्रिय छन् । उनी कांग्रेसका उत्तर प्रदेश अध्यक्षसमेत हुन् । आगराको फतेहपुर सीकरी क्षेत्रबाट उम्मेदवार भएका उनी भारतीय जनता पार्टीका उम्मेदवार राजकुमार चहरसँग ४ लाख ९५ हजार ६५ मतले पराजित भए ।
बलिउड नायिका उर्मिला मातोंडकर हालै राजनीतिमा प्रवेश गरेकी थिइन् । उनी कांग्रेस पार्टीबाट नर्थ मुम्बई क्षेत्रमा उम्मेदवार बनेकी थिइन् । उनी पनि नराम्ररी पराजित भइन् । उनलाई भारतीय जनता पार्टीका गोपाल शेट्टीले ४ लाख ६५ हजार २४७ मतले पराजित गरे ।
चन्डीगढ क्षेत्रबाट उम्मेदवार बनेकी चरित्र अभिनेत्री किरण खेरले कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पवनकुमार बंशललाई ४६ हजार ९७० मतले पराजित गरिन् । अभिनेत्री खेर भारतीय जनता पार्टीबाट निर्वाचित भएकी हुन् । उनी यसअघि पनि सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएकी थिइन् । अभिनेत्री जया प्रदा हालै भारतीय जनता पार्टीमा प्रवेश गरेकी थिइन् । यसअघि समाजवादी पार्टीमा रहेर राजनीति गर्दै आएकी उनी भारतीय जनता पार्टीबाट रामपुर क्षेत्रमा उम्मेदवार बनेकी थिइन् । उनी समाजवादी पार्टीका नेता आजम खानसँग एक लाख ९ हजार ९९७ मतले पराजित भइन् ।
बंगाली अभिनेत्री मुनमुन सेन आसनसोल निर्वाचन क्षेत्रमा बलिउडका हस्ती बाबुल सुप्रियोसँग पराजित भएकी छन् । त्रिणमुल कांग्रेसबाट उम्मेदवार भएकी मुनमुन भारतीय जनता पार्टीका उम्मेदवार सुप्रियोसँग करिब दुई लाख मतले पराजित भएकी हुन् ।
भारतीय जनता पार्टीमा लामो समय राजनीतिक जीवन बिताएर हालै कांग्रेसमा प्रवेश गरेका अभिनेता शत्रुघन सिन्हाका लागि दल परिवर्तन गर्नु घातक सिद्ध भयो । उनले पटना साहिव निर्वाचन क्षेत्रमा भारतीय जनता पार्टीका उम्मेदवार रविशंकर प्रसादसँग करिब तीन लाख मतले पराजय झेल्नु परेको छ ।
दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग तथा बलिउडका चर्चित अभिनेता प्रकाश राज बेंगलुरु सेन्ट्रल क्षेत्रबाट निर्दलीय उम्मेदवार बनेका थिए । उनी ५ लाख ७३ हजारभन्दा बढी मतले पराजित भएका छन् ।
कन्नड अभिनेत्री सुमनलताले कर्नाटकका मुख्यमन्त्री एचडी कुमारास्वामीका छोरा निखिललाई पराजित गरिन् । सुमनलता निर्दलीय उम्मेदवार हुन् । उनले एक लाख २५ हजारभन्दा बढी मतले निखिललाई पराजित गरेकी हुन् ।